Wed, May 27, 2020 at 2:05am
मंगलवार, २४ भाद्र २०७६,	आहाखबर	15.85K
तपाईंलाई रोजगारी दिने शर्तमा कसैले करको दायित्वसमेत थोपरिरहेको त छैन? रोजगारदाताले तपाईंको कागजात दुरुपयोग गरिरहेको त छैन? यसबारेमा समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बजारमा मजदुर वा कम्पनीसँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा प्यान दर्ता गरेर कारोबार गर्नेहरु भेटिए पछि सावधान गराएको छ ।
विभागले गुणस्तरीय दर्ता (Quality Registration) मा जोड दिँदै सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
कतिपय व्यवसायीले रोजगारी खोज्दै आउने मजदुरहरुलाई प्रयोग गरी तिनैको नाउँमा प्यान दर्ता गर्ने र कर दायित्वबाट पन्छिने कोशिस गरेका उदाहरण भेटिएका छन् । यसप्रति सजग गराउँदै विभागले गुणस्तरीय दर्ताको अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ । 'कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र निकाय दर्ता नभई कामदार वा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा कारोबार दर्ता गरी करको दायित्व अन्य व्यक्तिलाई सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको' विभागद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागले 'वास्तविक रुपमा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिका नाममा मात्र फर्म वा कम्पनी दर्ता भई आफ्नो कारोबारको सूनिश्चितता गरी दर्ता गर्न, गराउन' आग्रह गरेको छ । साथै गुणस्तरीय दर्तामा ध्यान दिई वास्तविक करदाता एकिन गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिईएको छ ।